ကစားသမားဘ၀မှာသာမက နည်းပြဘ၀မှာပါအောင်မြင်ခဲ့ကြသူများ အပိုင်း(၂)
10 Oct 2018 . 1:59 PM
ပရိသတ်တွေအတွက် ကစားသမားဘ၀မှာသာမက နည်းပြဘ၀မှာပါအောင်မြင်ခဲ့ကြသူတွေကို အပိုင်း(၁)အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုဆက်လက်ပြီး အပိုင်း(၂)ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၅) ဂျက်ဟေးနက်စ် Jupp Heynckes
ကစားသမားဘ၀မှာ မိုချန်ဂလာဘတ်အသင်းနဲ့ အတူတောက်ပခဲ့တဲ့ ဂျက်ဟေးနက်စ် Jupp Heynckes ဟာ နည်းပြဘ၀မှာတော့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်စာရင်းဝင်နည်းပြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျက်ဟေးနက်စ်ဟာ ကစားသမားဘ၀မှာ အနောက်ဂျာမနီအသင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ ယူရိုချန်ပီယံဆုတွေကိုရရှိခဲ့သလို နည်းပြဘ၀မှာလည်း ရီးယဲလ် ၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းတွေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျက်ဟေးနက်စ်ဟာ ကစားသမားဘ၀မှာ ဆုဖလား(၈)လုံးရရှိခဲ့ပြီး နည်းပြဘ၀မှာတော့ ဆုဖလား(၁၂)လုံး ရရှိထားပါတယ်။
(၄) ဒဲဂလစ်ရှ် Kenny Dalglish
ဆဲလ်တစ်နဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းတို့ရဲ့ ဂန္ထ၀င် ဒဲဂလစ်ရှ် Dalglish ဟာ ကစားသမားဘ၀မှာသာမက နည်းပြဘ၀မှာပါအောင်မြင်ခဲ့သူပါ။ ဒဲဂလစ်ရ်ှဟာ ကစားသမားဘ၀မှာ ဆဲလ်တစ် ၊ လီဗာပူးလ်အသင်းတွေနဲ့ အတူ အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့သလို နည်းပြဘ၀မှာလည်း လီဗာပူးလ် ၊ ဆဲလ်တစ် ၊ ဘလက်ဘန်းအသင်းတွေနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒဲဂလစ်ရ်ှဟာ ဘလက်ဘန်းအသင်းကို ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆု ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားဘ၀မှာ ဒဲဂလစ်ရ်ှဟာ ဆုဖလား(၂၆)လုံးရရှိခဲ့ပြီး နည်းပြဘ၀မှာတော့ ဆုဖလား(၁၂)လုံး ရရှိထားပါတယ်။
(၃) ဒဲလ်ဘော့စကေး Del Bosque
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င် ဒဲလ်ဘော့စကေး Del Bosque ဟာ ကစားသမားဘ၀မှာရော နည်းပြဘ၀မှာပါ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့သူပါ။ ဒဲလ်ဘော့စကေးဟာ နည်းပြဘ၀မှာစပိန်အသင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ ယူရိုချန်ပီယံဆုတွေကို ရရိ်ှခဲ့သူဖြစ်ပြီး စပိန်အသင်းရဲ့ ခေတ်တစ်ခေတ်ကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒဲလ်ဘော့စကေးဟာ ကစားသမားဘ၀မှာ ဆုဖလား(၉)လုံးရရှိခဲ့ပြီး နည်းပြဘ၀မှာတော့ ဆုဖလား(၁၀)လုံး ရရှိထားပါတယ်။
(၂) မီဂွယ်လ်မူနော့ဇ် Miguel Munoz
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င် မီဂွယ်လ်မူနော့ဇ် Miguel Munoz ဟာ ကစားသမားဘ၀မှာရော နည်းပြဘ၀မှာပါ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့သူပါ။ မီဂွယ်လ်မူနော့ဇ်ဟာ ဥရောပဖလား(ချန်ပီယံလိဂ်)ကို ကစားသမားဘ၀မှာရော နည်းပြဘ၀မှာပါ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့အတူ ရယူနိုင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ မီဂွယ်လ်မူနော့ဇ်ဟာ ကစားသမားဘ၀မှာ ဆုဖလား(၉)လုံးရရှိခဲ့ပြီး နည်းပြဘ၀မှာတော့ ဆုဖလား(၁၄)လုံး ရရှိထားပါတယ်။
(၁) ဇာဂါလို Zagallo
ဘရာဇီးလ် ဂန္ထ၀င် ဇာဂါလို Zagallo ဟာ ကလပ်အသင်းမှာရော နိုင်ငံအသင်းမှာပါ ကစားသမားဘ၀မှာသာမက နည်းပြဘ၀မှာပါအောင်မြင်ခဲ့သူပါ။ ဇာဂါလိုဟာ ကစားသမားဘ၀မှာရော နည်းပြဘ၀မှာပါ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားဘ၀မှာ ဇာဂါလိုဟာ ဆုဖလား(၉)လုံးရရှိခဲ့ပြီး နည်းပြဘ၀မှာတော့ ဆုဖလား(၆)လုံး ရရှိထားပါတယ်။
ကစားသမားဘ၀မှာသာမက နည်းပြဘ၀မှာပါအောင်မြင်ခဲ့ကြသူများ အပိုင်း(၁)
Photo: Jornal de Alagoas , El Horizonte , Bundesliga Fanatic , 101 Great Goals , NewsLocker
ကစားသမားဘဝမှာသာမက နညျးပွဘဝမှာပါအောငျမွငျခဲ့ကွသူမြား အပိုငျး(၂)
ပရိသတျတှအေတှကျ ကစားသမားဘဝမှာသာမက နညျးပွဘဝမှာပါအောငျမွငျခဲ့ကွသူတှကေို အပိုငျး(၁)အနနေဲ့ ဖျောပွပေးခဲ့ပွီးပါပွီ။ အခုဆကျလကျပွီး အပိုငျး(၂)ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၅) ဂကျြဟေးနကျဈ Jupp Heynckes
ကစားသမားဘဝမှာ မိုခနျြဂလာဘတျအသငျးနဲ့ အတူတောကျပခဲ့တဲ့ ဂကျြဟေးနကျဈ Jupp Heynckes ဟာ နညျးပွဘဝမှာတော့ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျစာရငျးဝငျနညျးပွဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဂကျြဟေးနကျဈဟာ ကစားသမားဘဝမှာ အနောကျဂြာမနီအသငျးနဲ့အတူ ကမ်ဘာ့ဖလားနဲ့ ယူရိုခနျြပီယံဆုတှကေိုရရှိခဲ့သလို နညျးပွဘဝမှာလညျး ရီးယဲလျ ၊ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးတှနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဂကျြဟေးနကျဈဟာ ကစားသမားဘဝမှာ ဆုဖလား(၈)လုံးရရှိခဲ့ပွီး နညျးပွဘဝမှာတော့ ဆုဖလား(၁၂)လုံး ရရှိထားပါတယျ။
(၄) ဒဲဂလဈရျှ Kenny Dalglish
ဆဲလျတဈနဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးတို့ရဲ့ ဂန်ထဝငျ ဒဲဂလဈရျှ Dalglish ဟာ ကစားသမားဘဝမှာသာမက နညျးပွဘဝမှာပါအောငျမွငျခဲ့သူပါ။ ဒဲဂလဈရျှဟာ ကစားသမားဘဝမှာ ဆဲလျတဈ ၊ လီဗာပူးလျအသငျးတှနေဲ့ အတူ အကွီးအကယျြအောငျမွငျခဲ့သလို နညျးပွဘဝမှာလညျး လီဗာပူးလျ ၊ ဆဲလျတဈ ၊ ဘလကျဘနျးအသငျးတှနေဲ့ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ ဒဲဂလဈရျှဟာ ဘလကျဘနျးအသငျးကို ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆု ရရှိအောငျစှမျးဆောငျပေးနိုငျခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။ ကစားသမားဘဝမှာ ဒဲဂလဈရျှဟာ ဆုဖလား(၂၆)လုံးရရှိခဲ့ပွီး နညျးပွဘဝမှာတော့ ဆုဖလား(၁၂)လုံး ရရှိထားပါတယျ။
(၃) ဒဲလျဘော့စကေး Del Bosque
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျ ဒဲလျဘော့စကေး Del Bosque ဟာ ကစားသမားဘဝမှာရော နညျးပွဘဝမှာပါ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့ အောငျမွငျခဲ့သူပါ။ ဒဲလျဘော့စကေးဟာ နညျးပွဘဝမှာစပိနျအသငျးနဲ့အတူ ကမ်ဘာ့ဖလားနဲ့ ယူရိုခနျြပီယံဆုတှကေို ရရှိခဲ့သူဖွဈပွီး စပိနျအသငျးရဲ့ ခတျေတဈခတျေကို ထူထောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒဲလျဘော့စကေးဟာ ကစားသမားဘဝမှာ ဆုဖလား(၉)လုံးရရှိခဲ့ပွီး နညျးပွဘဝမှာတော့ ဆုဖလား(၁၀)လုံး ရရှိထားပါတယျ။
(၂) မီဂှယျလျမူနော့ဇျ Miguel Munoz
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျ မီဂှယျလျမူနော့ဇျ Miguel Munoz ဟာ ကစားသမားဘဝမှာရော နညျးပွဘဝမှာပါ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့ အောငျမွငျခဲ့သူပါ။ မီဂှယျလျမူနော့ဇျဟာ ဥရောပဖလား(ခနျြပီယံလိဂျ)ကို ကစားသမားဘဝမှာရော နညျးပွဘဝမှာပါ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့အတူ ရယူနိုငျခဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ။ မီဂှယျလျမူနော့ဇျဟာ ကစားသမားဘဝမှာ ဆုဖလား(၉)လုံးရရှိခဲ့ပွီး နညျးပွဘဝမှာတော့ ဆုဖလား(၁၄)လုံး ရရှိထားပါတယျ။
ဘရာဇီးလျ ဂန်ထဝငျ ဇာဂါလို Zagallo ဟာ ကလပျအသငျးမှာရော နိုငျငံအသငျးမှာပါ ကစားသမားဘဝမှာသာမက နညျးပွဘဝမှာပါအောငျမွငျခဲ့သူပါ။ ဇာဂါလိုဟာ ကစားသမားဘဝမှာရော နညျးပွဘဝမှာပါ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးသူပဲဖွဈပါတယျ။ ကစားသမားဘဝမှာ ဇာဂါလိုဟာ ဆုဖလား(၉)လုံးရရှိခဲ့ပွီး နညျးပွဘဝမှာတော့ ဆုဖလား(၆)လုံး ရရှိထားပါတယျ။
ကစားသမားဘဝမှာသာမက နညျးပွဘဝမှာပါအောငျမွငျခဲ့ကွသူမြား အပိုငျး(၁)
by Naing Linn . 40 mins ago
by Ko Kyue . 24 hours ago